ကျွန်တော်တို့၏ ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာအိမ်၊ ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကို ၂၀ဝ၃ခုနှစ်၊ ( )ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ မန္တလေး အိမ်၊ ခြံ၊ မြေလောကတွင် နာမည်ကောင်းဖြင့် အအောင်မြင်ဆုံးသော (၁၂)နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယခုရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာကုမ္ပဏီကို ယခင်ကထွန်းသစ္စာအိမ်၊ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအဖြစ်အောင်မြင်စွာရပ်တည်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရာတွင် နာမည်တူ ရှိနေပါသောကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာကုမ္ပဏီ အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ဥက္ကဌမှာ ဦးတင်မောင်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ နှင့်ပူးပေါင်း၍အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းလိုသူ Customer များ၏ စိတ်တိုင်းကျ သည်အထိတိကျမှန်ကန်၊ မြန်ဆန်စွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးစားမှုနှင့်ရိုးသားမှု၊ Customer များအပေါ် စေတနာကိုအဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ Customer များ၏ လက်ခံယုံကြည်အားပေးမှုတို့ကြောင့် ယနေ့အထိ ရပ်တည်လာနိုင်ပါသည်။
Trust,Value and Passion ဆိုတဲ့စာသားနှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၊ တန်းဖိုးရှိခြင်း ပြီးမြောက်စေခြင်း ဆိုတဲ့စကားနှင့်အညီ ယုံကြည်အားကိုးခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေနှင့် ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာကုမ္ပဏီကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
Our real estate Royal Tun Thitsar company started at 2003.
Today in real estate field Mandalay,Our company is reputable and successful for 12 years age.
When we register our company name,it has same name at 25.7.2013.
Nowaday, our company name and change from real estate Tun Thitsar , old name .
The chairman of our company is U Tin Maung.
He gets together the economists and the jurist.Our company dutifully service to buy ,sell and rent I of customer’s element with accuracy and quickness.
Today,we can stand with the acceptability of the customer ,servicing with benevolence for the customer mainly ,being skillful,dutiful,rightful of our company and cop out of our employees.
By holding Trust,Value and Passion, our company,Royal TunThitsar real estate service reliantly havealine on good news.
The Members of company director are,
U Kyaw Htin Lin
Daw Sandar Win
Daw Ei Thandar Phyu